Madaxweyne Xasan Sheekh “Inta Muwaadin Soomaaliyed Hantidiisa la heyso Soomaaliya Ma dageyso” | idalenews.com
Home Idale Somali News Update Madaxweyne Xasan Sheekh “Inta Muwaadin Soomaaliyed Hantidiisa la heyso Soomaaliya Ma dageyso”
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta furay shirweynaha qaran ee ka wada tashiga dib u habeynta Garsoorka dalka, isagoo khudbad xasaasi ah oo dhinacyo badan taabaneysay uu ka jeediyay.
Shirweynahan oo ah kii u horeeyay noociisa oo ay dowladda Soomaaliya qabato ayaa waxaa ka qeyb galaya Wakiillo ka socday Maamullada Gobollada Dalka,Gar-yaqaanno,Aqqoonyahanno iyo Culumaa’udiin ka kala yimid Gudaha iyo Dibadda Dalka.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa khudbad dhinacyo badan taabaneysay ka jeediyay furitaanka shirka, isagoo sheegay in shirkan uu aas aas u yahay sidii dadka Soomaaliyeed ay ugu kalsoonaan lahaayeen Garsoorka wadanka, maadaama ay cabasho badan horay uga keeneen Muwaadiniin Soomaaliyeed kuwaasoo ay sabab u yihiin daruufaha uu xilligaan wadanka ku suganyahay.
Madaxweynaha ayaa xusay in shirkan uu sidoo kale qeyb ka yahay 15 Shirweyne Qaran oo ay Dowladdu dooneyso inay ku qabato gudaha dalka, isagoo intaasi ku daray in waxyaabaha laga soo saaro Shirkan ay Dowladdu ka go’antahay diyaarna u tahay inay Dhaqangeliso maadaama ay soo saareen Wakiillo matalaya Guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed.
“Dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go’an in ay Dalka ka hirgeliso Garsoor Dhab ah oo qaabeysan iyo Siyaasad Deggan si ay Ummadda Soomaaliyeed ugu dhiiradaan inaysan gorgortan ka gelin waxa ay xaq u leeyihiin una adeegsadaan Sharciga” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha oo khudbaddiisa sii wata ayaa ka codsaday ka qeybgaleyaasha Shirweynaha inay booqdaan inta uu socdo Shirweynahan Goobaha ay ku shaqeeyaan hay’adaha Garsoorka iyo caddaalladda u qaabilsan Soomaaliya gaar ahaan Maxkamadaha,Xabsiga Dhexe iyo Saldhigyada Ciidamada Booliska Soomaaliyeed si ay u helaan Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida ay u shaqeeyaan.
“Inta Muwaadin Soomaaliyed hantidiisa la heysto, Gurigiisa la heysto, beertiis la heysto Soomaaliya ma dageyso, waa in laga shaqeeya sidii la isku celin lahaa hantida la kala heysto”ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Madaxweynaha ayaa ku baaqay in la isku celiyo hantida la kala qaatay, isagoo sheegay in wixii ka dambeeyay 26-kii Janaayo 1991-dii wixii Hanti dowlad ay laheyd ee la bixiyay aan waxba ka jirin, isla markaana hantida dowladda dib loo soo celiyo.
Sidoo kale Masuuliyiintii ka hadashay Furitaanka Shirweynaha oo ay kamid ahaayeen Guddoomiyaha Maxkmadda sare ee dalka Ceydiid Ilkaxanaf,Wasiirka Garsoorka ,arrimaha Diinta iyo Awqaafta C/llaahi abyen Nuur, Duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Tarzan iyo Wasiiru Dowlaha cadaaladda Puntland Yuusuf Axmed Kheyr ayaa uga Mahadceliyay Madaxweynaha Somalia Go’aanka iyo Fikirka muhiimka ah uu qaatay ee ah in la qabto Shirweyne Heer Qaran ah oo looga arrinsanayo Dib u habeynta Garsoorka Somalia.
Sidoo kale waxaa Galabta madasha uu shirka ka socdo lagu soo bandhigay Taariikhda iyo Maraxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray Garsoorka Soomaaliya,iyadoo masuuliyiintii ka hadashay ay kamid ahaayeen Sh. Bashiir Axmed Salad Guddoomiyaha Hay’adda Culimada Soomaaliyeed iyo Prof.C/Wahaab oo kamid ah Xubnaha Guddiga Heerka Qaran ee Qabanqaabada Shirweynaha looga tashanayo Garsoorka.
Shirweynaha oo socon doona Ilaa 5-April ayaa waxaa qarashaadka ku baxaya bixinaysa Xukuumadda Soomaaliya iyadoo wax kaalmo ah ka heleynin Dowlado Shisheeye ama hay’ado caalami ah.
Waa Shirweynihii ugu horreeyay oo ay qabato Dowladda Soomaaliya 22 Sano kadib oo uusan Garsoorka Soomaaliya u shaqeyn sidii loogu talagalay maadaama ay Hay’adihii Garsoorka kamid noqdeen Hay’adihii ka burburay qaranka Soomaaliyeed mudadii ay kala dambeyn la’aantu ka jirtay wadanka.
Previous articleRa’iisiul Wasaaraha oo Maamulka KMG ah u magacaabay Gobolka Gedo iyo Ciidamada Ahlusuna oo la qarameeyay
Next articleWasiirka Arrimaha Dibada Finland oo maanta booqasho ku yimid magaalada Muqdisho